Diiwaanka Booqashada Martida ee Venezuela
Markay ahayd Abriil 28, wehel Venezuela oo Shiinaha ka tirsan ayaa u yimid shirkaddeena si ay u soo booqdaan alaabadayada aan dhisnayn waxayna uga tageen sawir qaali ah.
Dhawaan, fayraska oof wareenka ayaa halis gelinaya caafimaadka iyo badbaadada aadanaha oo dhan. Kadib ku dhawaad ​​laba bilood oo shaqo adag, dadka Shiinaha iyo shaqaalaha caafimaadka iyo kalkaalinta kalkaalinta Shiinaha ayaa ugu dambeyntii gaadhay guul aasaasi ah oo lagula dagaallamo cudurka faafa, iyo wax soo saarka gudaha iyo nolosha ayaa asal ahaan caadi ku soo laabtay. Wadamada kale iyo dadka wali kujiro khatarta cudurka faafa, si qoto dheer ayaan u xunahay una dareemeynaa isla dareenkaas. Dowladda Shiinaha iyo shacabka Shiinaha labaduba waxay iskudayaan intii karaankooda ah inay caawiyaan wadamadan iyo dadka u baahan. Waxaan rajeyneynaa in halista ka imaaneysa bini-aadamka oo dhan - covid-19 loo ciribtiri doono sida ugu dhaqsaha badan oo dadkuna ay nabad iyo caafimaad u heli doonaan. Ka dib oo dhan, ka dib doorka bulshada masiirka dadka, waxaan u baahanahay inaan isku duubno oo aan wada shaqeyno.
Iyada oo laga jawaabayo baaqa iskaashiga caalamiga ah, Shirkadeena Finzone Albaabada & Shirkadda Windows waxay si firfircoon u xoojisay iskaashiga ay la leedahay jaalayaasheeda gudaha iyo dibadaba si loo gaaro faa iideyn. horumarkii ugu dambeeyay ee taxanaha taxanaha, oo leh faa iidooyin badan, martidu aad ayey ugu qanacsan yihiin, laakiin sidoo kale annaga xitaa si aan u balaarino suuqa iibka ee Koonfurta Ameerika waxay ku biireen wax weyn.
lammaanahayagu wuxuu sheegay in Finzone uu yahay wixii uu ku arkay xilligan, waxyaabaha ugu badan, uguna dambeeyay ee ugu badan badeecooyinka kala duwan, kuwa ugu dambeeyay, ugu dhow shuruudaha alaabada macaamiisha. Ugu badnaan badeecada oo qurux badan, wax ku ool ah, amaan ah, ku mashquulsan boos yar iyo faa iidooyin kale. Uma xishoonno inaan ku faano, waxaan u sheegnaa, martida soosaarka waxyaabaha ugu fiican, adeegga ugu fiican.
Waxaanna si daacad ah u rajeynaynaa in marka uu dhammaado cudurka faafa, saaxiibo badan oo caalami ah ay u imaan karaan booqashada warshaddeenna, ay fahmi karaan badeecadeenna, isla markaana aan iskaashi dhow la yeelan karno Finzone.
Waqtiga boostada: Apr-28-2020